भरतपुर प्रकरणको फैसला आजै आउने ! मुद्दाको सुनुवाई सुरु - Samudrapari.com
भरतपुर प्रकरणको फैसला आजै आउने ! मुद्दाको सुनुवाई सुरु
काठमाडौं – चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ मा पुनस् मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथिको सुनुवाई भइरहेको छ । यसअघि पटक पटक सर्दै आएको सुनुवाई केहीबेरअघि सुरु भएको हो ।
न्यायधिश ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा सुनुवाई भइरहेको हो । गत बैशाख ३१ गते भएको निर्वाचनको मतगणनाका क्रममा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिले ९० वटा मतपत्र च्यातेपछि भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना स्थगित भएको हो ।
निर्वाचन आयोगले आवश्यक अनुसन्धान र प्राप्त प्रमाणका आधारमा पुनस् मतदान गर्ने निर्णय गरेपछि वडा नम्बर १९ का एमालेका वडा सदस्य उम्मेद्वार गुञ्जमान विक र अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले च्यातिएका मतपत्र बदर गरी बाँकी मत गणना गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।